Mere I Kwesịrị bụghị uche European Train Service | Save A Train
Home > Travel Europe > Mere I Kwesịrị bụghị uche European Train Service
(Emelitere ikpeazụ On: 18/06/2020)
Anyị niile na-agbalị ime ka anyị na-ejegharị ejegharị ahụmahụ mma ma na-eme ụzọ dị iche iche na aghụghọ zọpụta ego, oge na mgbalị. Ụtọ a ezumike ke esenidụt ebe pụtara na ị chọrọ ime ka oge ịrịba ama.
Ndị mere a na-eme njem Europe ụtọ a ọtụtụ ihe e na njem site na trans-European Railway Service bụ maa otu n'ime ha.
Europe bụ kọntinent nke ụfọdụ ndị kasị osisi njem nleta ebe na ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ na-enwe ndị kasị mma echiche nke mara mma n'ala, na-agbalị nke trans-European ụgbọ okporo ígwè ọrụ, ebe ị pụrụ ịnụ ụtọ ọtụtụ ụlọ ọrụ gụnyere akwụkwọ m ụgbọ okporo ígwè tiketi online. Gaa site blog ma mata ihe mere na ị na-ekwesịghị ileghara a dị ịtụnanya ụgbọ okporo ígwè na njem mgbe na Europe.
Mgbe Journey Ka Mkpa
N'ihi na ụfọdụ ndị, na njem bụ ihe dị mkpa karịa iru ebe karịsịa mgbe ị na- ejegharị ejegharị dị ka a njem nleta. Ọ bụrụ na ị na-na Europe, mgbe ahụ i kwesịrị bụghị uche ohere inyocha mara mma Afrika si nso.
Train njem na-enye gị ohere ime ka gị Europe njem dị ịrịba ama. enwe okomoko ụgbọ okporo ígwè njem ka iru ọtụtụ ebe n'ime Europe na uru nke online akwụkwọ m ụgbọ okporo ígwè tiketi nhọrọ.
Enwe Best of Europe
Europe bụ ebe obibi nke ụfọdụ nke kacha mma ụgbọ okporo ígwè rụọ na ụwa na ebe a ị pụrụ ịnụ ụtọ ụwa-klas ụgbọ okporo ígwè na njem n'agbanyeghị ihe bụ njedebe gị. German ụgbọ okporo ígwè, OBB, TGVLyria, Thalys na Eurostar bụ ụfọdụ ndị na-eduga ụgbọ okporo ígwè rụọ na Europe.
I nwere ike na-enweta ụgbọ okporo ígwè ọrụ site na ọtụtụ European obodo ruo gị chọrọ ebe n'ime Europe. Ị nwere ike ịga njem si Amsterdam na London, Berlin na Hamburg, Naples ka Rome, Milan ka Venice, London na Paris, London na Berlin, Vienna ka Munich na ọtụtụ ndị ọzọ ebe. Na mma akụkụ bụ na ị pụrụ ịnụ ụtọ nhọrọ nke a n'akwụkwọ m ụgbọ okporo ígwè tiketi ọ bụla oge.
Zụrụ Your Ticket Online
Nke a bụ ọzọ uru nke na-ahọrọ trans-European ụgbọ okporo ígwè ọrụ na-enweta ịma mma nke ala. ọ adịghị mkpa ebe ị na-, ị ka nwere ike akwụkwọ gị ụgbọ okporo ígwè tiketi online. Ọ bụrụ na i zubere njem Amsterdam si Paris na a akpan akpan data, i nwere ike nọrọ ná nchebe gị oche eji tupu ntinye akwụkwọ owuwu. ị nwere ike ịga na ukara ụgbọ okporo ígwè website nke a-atọ ndị ọzọ ụgbọ okporo ígwè tiketi ntinye akwụkwọ na-eweta ọrụ na akwụkwọ gị tiketi iji debit ma ọ bụ kaadị n'ebe ọ bụla site a akwụkwọ m ụgbọ okporo ígwè tiketi online.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị mere ị ga-gaghị agbaghara ndị trans-European ụgbọ okporo ígwè ọrụ mgbe na Europe. Iji mụtakwuo banyere ụgbọ okporo ígwè ọrụ, oge oge, na tiketi ntinye akwụkwọ owuwu, ị nwere ike ịga – www.saveatrain.com
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Freasons-why-you-should-not-miss-trans-european-train-service%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / de na / ma ọ bụ na / ru na ndị ọzọ asụsụ.